IDC dia hanavao ny tarehimarika fandefasana Xiaomi amin'ny telovolana voalohany 2019 | Androidsis
IDC dia namoaka tatitra tamin'ny 30 aprily tamin'ny antsipiriany momba ny isan'ny mpanamboatra finday nalefa tamin'ny telovolana voalohany 2019.
Ny statistika dia nanambara fa nandefa singa 25 tapitrisa i Xiaomi, 10% latsaka noho ny tamin'ny telovolana mitovy amin'ny taona 2018. Na izany aza, namoaka fanambarana an-gazety i Xiaomi izay maneho fa tsy marina sy ambany noho ireo nalefany io angona io. Andininy misimisy etsy ambany ...
Nilaza ilay goavambe teknolojia sinoa tamin'ny fanambarana an-gazety fa nandefa smartphone 27.5 tapitrisa tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2019. Noho izany dia namoaka ny fanambarany ny IDC ary nanambara fa hamerina ilay tatitra amin'ilay tarehimarika vaovao izy amin'ny herinandro ambony.
Mety manontany tena ianao hoe inona ilay sahirana, ary ny valiny dia zava-dehibe amin'ireo mpampiasa vola ireo tarehimarika ireosatria mila mahafantatra ny fahombiazan'ny orinasa tohanany izy ireo. Ny isa kely kokoa dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahatokisan'ny mpampiasa vola ny orinasa, zavatra izay misy fiatraikany lehibe amin'ny fampandrosoana, fitomboana ary fanitarana ny orinasa mihitsy.
Ny tatitry ny IDC dia tsy mitovy amin'ny an'ny masoivoho sasany, toy ny Canalys, Counterpoint, ary StrategyAnalytic. Ireo telo ireo dia nitatitra fa ny Xiaomi dia nandefa 27.8 tapitrisa, 27.8 tapitrisa ary 27.5 tapitrisa ny isany, izay avo kokoa noho ny tarika 25 tapitrisa an'ny IDC.
Xiaomi dia iray amin'ireo mpanamboatra dimy voalohany eo amin'ny tsenan'ny smartphone. Manana anjaran'ny tsena 8% izy ary mbola manitatra ny tratra. Tamin'ny volana lasa, namoaka ny Mandehana, ny Redmi 7 ary ny Redmi Note 7 any Nizeria, manamarika ny fidirany indray aty Afrika.
Ny CEO Xiaomi dia namoy filokana $ 150 tapitrisa niaraka tamin'ny filohan'ny Gree
Mety manatrika hetsika lehibe kokoa avy amin'ny mpanamboatra sinoa aza isika, satria efa ela no nanehoan'ny orinasa izany. Ny fanitarana sy ny lazany dia toa tsy mijanona, ny mifanohitra amin'izay no izy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » IDC dia hanavao ny tarehimarika fandefasana Xiaomi ho an'ny Q2019 XNUMX amin'ny herinandro ambony
Fialan-tsiny tena lafo: Apple dia handoa Qualcomm tsy latsaky ny $ 4,500 miliara